Mac ၏စခရင်ကိုမှန်အောင်ဘယ်လိုလုပ်နည်း | ကျွန်တော်က mac ကပါ။
Mac ဖန်သားပြင်ကို ဘယ်လိုမှန်ပြောင်းမလဲ။
Ignatius ခန်းမ | | Mac ကွန်ပျူတာများ, လဲ tutorial
ပရောဂျက်တစ်ခုလုပ်ဆောင်သောအခါတွင်၊ သင်သည် Mac မျက်နှာပြင်အရွယ်အစားနှင့် လွှမ်းခြုံထားပြီး ဖြစ်နိုင်ခြေကို ထည့်သွင်းစဉ်းစားမိသည်မှာ အလားအလာရှိသည်။ ပြင်ပမော်နီတာတစ်လုံးဝယ်ပါ။. ၎င်းသည် အမြန်ဆန်ဆုံးနှင့် အလွယ်ကူဆုံးဖြေရှင်းချက်ဖြစ်သည်မှာ မှန်သော်လည်း ကျွန်ုပ်တို့တွင် iPad ရှိပါက မည်သည့်ရင်းနှီးမြုပ်နှံမှုမှ ပြုလုပ်ရန်မလိုအပ်ပါ။
မင်းရှာနေသလားပြောပါ။ Mac မျက်နှာပြင်ကို မှန်ကြည့်ရန် နည်းလမ်းများထို့နောက်၊ ကျွန်ုပ်တို့သည် Apple မှ ကျွန်ုပ်တို့အား ပေးဆောင်သော မူရင်းရွေးချယ်မှုများနှင့် ပြင်ပအဖွဲ့အစည်းများမှတဆင့် ကျွန်ုပ်တို့၏ စိတ်ကြိုက်ရွေးချယ်ခွင့်ရှိပြီး ၎င်းတို့မှာ မှန်ကန်သည့်အတိုင်း စျေးကွက်တွင် လက်ရှိရရှိနိုင်သည့် အကောင်းဆုံးရွေးချယ်စရာများကို သင့်အား ပြသပေးပါသည်။
2 Sidecar လုပ်ဆောင်ချက်နှင့်အတူ
2.1 Sidecar Compatible Mac မော်ဒယ်များ
2.2 Sidecar နှင့်လိုက်ဖက်သော iPad မော်ဒယ်များ
2.3 iPad ပေါ်တွင် Mac မျက်နှာပြင်ကို မှန်ပြောင်းကြည့်ပါ။
2.4 iPad သို့ အက်ပ်တစ်ခု ပို့ပါ။
3 ပြင်ပမော်နီတာ ချိတ်ဆက်ခြင်း။
4 Luna ပြသခြင်း
5 Duet Display ပါ
လိုချင်ရင် ရုပ်မြင်သံကြား ဖန်သားပြင်ပေါ်တွင် ပြသထားသော အကြောင်းအရာကို တိုးချဲ့ပါ။ ကျွန်ုပ်တို့တွင် Apple TV နှင့်ချိတ်ဆက်ထားသော၊ ၎င်းကို macOS High Sierra မှစတင်လုပ်ဆောင်နိုင်သည်။
လုပ်ငန်းစဉ်သည် ကလစ်နှိပ်သကဲ့သို့ ရိုးရှင်းပါသည်။ airplay အိုင်ကွန် ကျွန်ုပ်တို့၏ Mac ၏ အထက်မီနူးဘားတွင် တည်ရှိပြီး တီဗီချိတ်ဆက်ထားသည့် Apple TV အမည်ကို ရွေးချယ်ပါ။
macOS Big Sur မှစတင်၍ macOS ရရှိထားသော ဒီဇိုင်းအသစ်ဖြင့် AirPlay ခလုတ်ကို ပေါင်းစပ်ထားသည်။ ထိန်းချုပ်ရေးစင်တာ, အမည်အောက်တွင် ဖန်သားပြင်ကိုထင်ဟပ်ပြသခြင်း.
ချိတ်ဆက်မှုပြုလုပ်သောအခါတွင်၊ AirPlay အိုင်ကွန်ကို အပြာရောင်ဖြင့် ပြသမည်ဖြစ်သည်။ ချိတ်ဆက်မှုကို ပိတ်ရန်၊ အထက်မီနူးဘား သို့မဟုတ် Control Center တွင် ဤတူညီသောအိုင်ကွန်ကို နှိပ်ရပါမည် - Duplicate screen ကိုနှိပ်ပါ။ ကျွန်ုပ်တို့၏စက်ပစ္စည်း၏ ထပ်နေသည့်မျက်နှာပြင်ကိုပြသနေသည့် စက်ပစ္စည်းပေါ်တွင်။
iOS 13 နှင့် macOS Catalina ဖြန့်ချိမှုနှင့်အတူ Cupertino အခြေစိုက် ကုမ္ပဏီသည် အဆိုပါအင်္ဂါရပ်ကို မိတ်ဆက်ခဲ့သည်။ ဆိုက်ကား. ဤလုပ်ဆောင်ချက်သည် Mac ကိုခွင့်ပြုသည်။ Mac မျက်နှာပြင်ကို iPad သို့ချဲ့ထွင်ပါ သို့မဟုတ် မှန်ပြောင်းကြည့်ပါ။
ဤလုပ်ဆောင်ချက်ကြောင့် iPad Pro ရှိသည့်အသုံးပြုသူများသည် Photoshop၊ Pixelmator သို့မဟုတ် အခြားရုပ်ပုံတည်းဖြတ်မှုတစ်ခုခုနှင့် လုပ်ဆောင်နိုင်သည်။ Apple Pencil နဲ့
ပထမ လိုအပ်ချက်က အဲဒါပါပဲ။ စက်ပစ္စည်းနှစ်ခုလုံးကို တူညီသော Apple ID ဖြင့် စီမံခန့်ခွဲပါသည်။ ၎င်းတို့သည် တူညီသော Wi-Fi ကွန်ရက်သို့လည်း ချိတ်ဆက်ထားသောကြောင့် အချက်အလက်များသည် bluetooth ချိတ်ဆက်မှုကို အသုံးပြုခြင်းထက် များစွာမြန်ဆန်စွာ လွှဲပြောင်းပေးသောကြောင့် ဖြစ်သည်။ လျှပ်စီးကြောင်း သို့မဟုတ် USB-C ဖြင့် စက်ပစ္စည်းနှစ်ခုလုံးကို iPad အားသွင်းကြိုးမှတစ်ဆင့် ချိတ်ဆက်ရန် ရွေးချယ်ခွင့်လည်းရှိသည်။
ဒုတိယ လိုအပ်ချက်မှာ ဤလုပ်ဆောင်ချက်ကြောင့် ကန့်သတ်ချက်များ ပိုမိုတွေ့ရှိနိုင်မည်ဖြစ်သည်။ Macs အားလုံးနှင့် တွဲဖက်၍မရပါ။ စျေးကွက်တွင် iPad အားလုံးနှင့်မဆိုင်သကဲ့သို့၊
Sidecar Compatible Mac မော်ဒယ်များ
MacBook Pro 2016 သို့မဟုတ်ထိုထက်နောက်ကျသည်
MacBook 2016 သို့မဟုတ်ထိုထက်နောက်ကျသည်
MacBook Air 2018 သို့မဟုတ်ထိုထက်နောက်ကျသည်
iMac 21 မှ 2017 သို့မဟုတ်နောက်ပိုင်း
iMac 27 မှ 5K 2015 နှင့်ထိုထက်နောက်ကျသည်
Pro ကို iMac
Mac mini 2018 သို့မဟုတ်ထိုထက်နောက်မှ
Mac Pro ကို 2019 ခုနှစ်
Sidecar နှင့်လိုက်ဖက်သော iPad မော်ဒယ်များ
iPad Pro အားလုံးမော်ဒယ်များ
iPad ၆ မျိုးဆက်၊
iPad Air ကို 3rd မျိုးဆက်သို့မဟုတ်ထိုထက်ပို
iPad mini 5th မျိုးဆက်၊
iPad ပေါ်တွင် Mac မျက်နှာပြင်ကို မှန်ပြောင်းကြည့်ပါ။
အထက်ဖော်ပြပါ လိုအပ်ချက်များအားလုံးကို ဖြည့်ဆည်းပေးမည်ဆိုပါက မီနူးဘား၏အပေါ်ဆုံးသို့သွား၍ ခလုတ်ကိုနှိပ်ပါ။ AirPlay သင်္ကေတ. macOS Big Sur မှစတင်၍ macOS ရရှိထားသော ဒီဇိုင်းအသစ်ဖြင့် AirPlay ခလုတ်ကို ပေါင်းစပ်ထားသည်။ ထိန်းချုပ်ရေးစင်တာ, အမည်အောက်တွင် ဖန်သားပြင်ကိုထင်ဟပ်ပြသခြင်း.
ဒီ option ကိုနှိပ်ခြင်းအားဖြင့်, အလိုအလျောက် ကျွန်ုပ်တို့၏ iPad ၏အမည်ကိုပြသလိမ့်မည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ Mac မှ အချက်ပြမှုကို ပေးပို့နိုင် သို့မဟုတ် ပွားနိုင်သည့် စက်ပစ္စည်းများတွင်
ခဏ မှစ. , ကျွန်ုပ်တို့၏ iPad ၏ မျက်နှာပြင်သည် ကျွန်ုပ်တို့၏ Mac နှင့် တူညီသောပုံကို စတင်ပြသမည်ဖြစ်သည်။. မျက်နှာပြင်ဖွဲ့စည်းပုံရွေးချယ်မှုများအတွင်း၊ ကျွန်ုပ်တို့သည် ကျွန်ုပ်တို့၏စားပွဲပေါ်တွင်ထားရှိပုံနှင့်လိုက်လျောညီထွေဖြစ်စေရန်အတွက် iPad မျက်နှာပြင်၏အနေအထားကို ရွှေ့နိုင်သည်။
iPad သို့ အက်ပ်တစ်ခု ပို့ပါ။
iPad စခရင်ကိုသုံးမယ့်အစား Mac မျက်နှာပြင်ကိုမှန်ဖို့ဆိုရင်၊ တိုးချဲ့ပြသမှုအဖြစ် ၎င်းကို အသုံးပြုပါ။ငါတို့လည်း လုပ်နိုင်တယ်။ အမှန်တော့၊ ၎င်းသည် ကျွန်ုပ်တို့ ၎င်းကို စဖွင့်သောအခါတွင် စတင်အသုံးပြုနိုင်သည့် မူလရွေးချယ်မှုဖြစ်သည်။
ဤနည်းအားဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့လုပ်နိုင်သည် Mac တွင်မဟုတ်ဘဲ iPad ပေါ်တွင်သာပြသရန်အက်ပ်များကိုပေးပို့ပါ။. iPad သို့ အက်ပလီကေးရှင်းတစ်ခု ပေးပို့ရန်၊ ကျွန်ုပ်တို့သည် ဝင်းဒိုး၏ အရွယ်အစားနှင့် အနေအထားကို ချိန်ညှိရန် ရွေးချယ်မှုအား iPad သို့ အက်ပ်လီကေးရှင်းသို့ ပေးပို့ရန် ရွေးချယ်မှုနှင့်အတူ မပြသမီအထိ Maximize ခလုတ်ကို နှိပ်၍ ဖိထားရပါမည်။
အိမ်တွင် မော်နီတာ သို့မဟုတ် ရုပ်မြင်သံကြားရှိပါက အလျင်မြန်ဆုံးနှင့် အလွယ်ဆုံးဖြေရှင်းချက်မှာ မော်နီတာအား ဆိပ်ကမ်းတစ်ခုမှတစ်ဆင့် ကျွန်ုပ်တို့၏စက်ပစ္စည်းနှင့် ချိတ်ဆက်ရန်ဖြစ်သည်။ Display Port၊ HDMI သို့မဟုတ် USB-C ၎င်းကိုကျွန်ုပ်တို့ချိတ်ဆက်သောကိရိယာပေါ် မူတည်.
နောက်ပိုင်းမှာ ကျနော်တို့က ဝင်ခွင့်ရမယ်။ System preferences နှင့် စခရင်ကဏ္ဍတွင်၊ အကြောင်းအရာကို ပွားခြင်း သို့မဟုတ် ဒက်စ်တော့၏ အရွယ်အစားကို ချဲ့ခြင်းဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့သည် မျက်နှာပြင်ကို မည်သို့ အလုပ်လုပ်စေလိုသည်ကို ရွေးချယ်ပါ။
Luna Display ဆိုတာကတော့ ကျွန်ုပ်တို့၏ Mac နှင့် ချိတ်ဆက်နိုင်သော သေးငယ်သော dongle ကျွန်ုပ်တို့၏ Mac မှ signal ကို iPad သို့ပေးပို့နိုင်သည်။ Sidecar လုပ်ဆောင်ချက်နှင့်မတူဘဲ၊ Luna Display ဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်စက်ပစ္စည်းတစ်ခုစီအတွက်ကန့်သတ်ချက်များမရှိပါ၊ ဆိုလိုသည်မှာ၎င်းသည်စျေးကွက်ရှိမည်သည့် Mac နှင့် iPad နှင့်မဆိုသဟဇာတဖြစ်သည်။
ဒါပေမယ့်လည်း, ၎င်းကို Windows PC နှင့်လည်း ချိတ်ဆက်နိုင်သည်။Mac နှင့် PC နှစ်ခုလုံးအတွက် iPad ကို ဒုတိယမျက်နှာပြင်အဖြစ် အသုံးပြုရန် ဤစက်ပစ္စည်းကို အံ့ဖွယ်ရွေးချယ်မှုဖြစ်စေသည်။
Luna Display နဲ့ မလုံလောက်သလိုပဲ၊ မည်သည့် Mac သို့မဟုတ် Windows PC ကိုမဆို ကျွန်ုပ်တို့၏ Mac အတွက် ပြင်ပမျက်နှာပြင်အဖြစ် ပြောင်းလဲပါ။. ကျွန်ုပ်တို့မြင်ရသည့်အတိုင်း Luna Display သည် Apple သို့မဟုတ် Windows မည်သည့်စက်ပစ္စည်းကိုမဆို အသုံးပြုသူများအတွက် ဖြစ်နိုင်ချေရှိသောကမ္ဘာတစ်ခုဖြစ်သည်။
Luna Display ဟာ ဈေးနှုန်းမြင့်မားပြီး၊ 129,99 ဒေါ်လာသို့သော်၊ ၎င်းသည် ဇာတိ Sidecar လုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းကို အခွင့်ကောင်းယူရန် ခွင့်မပြုဘဲ ၎င်းတို့နှစ်ခု၏ မည်သည့်စက်ပစ္စည်းပေါ် မူတည်၍ iPad သို့မဟုတ် Mac အသစ်ကို ဝယ်ယူခြင်းထက် များစွာစျေးသက်သာသော ရွေးချယ်မှုတစ်ခု ဖြစ်သေးသည်။
Luna Display ကို iPad တွင် အလုပ်လုပ်စေပြီး ၎င်းကို အလယ်တန်းစခရင်အဖြစ် အသုံးပြုနိုင်ရန် ကျွန်ုပ်တို့ လိုအပ်ပါသည်။ အောက်ပါ app ကို download လုပ်ပါ။
ငါတို့လိုချင်တယ်ဆိုရင် Mac သို့မဟုတ် Windows PC ကိုဒုတိယမျက်နှာပြင်အဖြစ်အသုံးပြုရန်ဖြစ်သည်။ကျွန်ုပ်တို့သည် Astropad ဝဘ်ဆိုက် (Luna Display ၏ဖန်တီးသူ) နှင့် သွားရောက်ကြည့်ရှုရပါမည်။ သက်ဆိုင်ရာ software ကို download လုပ်ပါ။.
Luna Display ကို ဗားရှင်းများဖြင့် ရနိုင်ပါသည်။ USB မှတ်-C မှာ (Mac နှင့် Windows အတွက်)၊ display ဆိပ်ကမ်း Mac နှင့် HDMI Windows အတွက်။ သူတို့အားလုံးမှာ တူညီတဲ့စျေးနှုန်းရှိတယ်။
Duet Display ပါ
သင့်တွင် တွဲဖက်အသုံးပြုနိုင်သော Mac သို့မဟုတ် iPad မရှိပါက၊ စျေးအသက်သာဆုံးဖြေရှင်းချက်မှာ အက်ပ်ကို အသုံးပြုခြင်းဖြစ်သည်။ စျေးနှုန်း 19,99 ယူရိုရှိသော အက်ပလီကေးရှင်း Duet Display App Store တွင်ရှိပြီး ၎င်းသည် ကျွန်ုပ်တို့၏ iPhone သို့မဟုတ် iPad ကို ကျွန်ုပ်တို့၏ Mac အတွက် နောက်ထပ်မျက်နှာပြင်တစ်ခုအဖြစ် ပြောင်းလဲပေးပါသည်။
ဤအပလီကေးရှင်း၏တစ်ခုတည်းသောအချက်မှာ၊ Apple Pencil ကိုသုံးချင်ရင် ကျွန်ုပ်တို့၏ iPad ၏စျေးနှုန်းတွင် ထပ်လောင်းစာရင်းသွင်းမှုတစ်ခုအတွက် ကျွန်ုပ်တို့ ပေးဆောင်ရမည်ဖြစ်သည်။ သို့သော်၊ iPad အသစ် သို့မဟုတ် Mac အသစ်ဝယ်ခြင်းထက် များစွာစျေးသက်သာသော ရွေးချယ်မှုတစ်ခုဖြစ်သည်။
Duet Display ပါ€ 14,99
အက်ပ်ကို မဝယ်မီ ၎င်းကို ကျွန်ုပ်တို့ စမ်းသပ်နိုင်သည်။ လျှော့ချဗားရှင်းကိုဒေါင်းလုဒ်လုပ်ခြင်း။ ဤလျှောက်လွှာ၏အောက်ပါ link မှတဆင့်။
ကျွန်ုပ်တို့၏ iPad တွင် အပလီကေးရှင်းကို ထည့်သွင်းပြီးသည်နှင့်၊ ကျွန်ုပ်တို့သည် macOS Big Sur သို့မဟုတ် နောက်ပိုင်းတွင် macOS Big Sur တွင်ရှိနေပါက၊ ကျွန်ုပ်တို့သည် မီနူးဘားရှိ AirPlay ခလုတ် သို့မဟုတ် Duplicate screen menu သို့သွားပါ။ ကျွန်ုပ်တို့၏ iPad အမည်ကို ရွေးချယ်ပါ။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - ငါက Mac ကပါ » Apple » လဲ tutorial » Mac ဖန်သားပြင်ကို ဘယ်လိုမှန်ပြောင်းမလဲ။
Apple သည် အာရှနှစ်သစ်ကို ဂုဏ်ပြုရန်အတွက် Limited Edition Beats Studio Buds ကို ဖြန့်ချိခဲ့သည်။
COVID ကြောင့် US မှာ Apple Stores 25 ခု ပိတ်ထားပြီးပါပြီ။